Irénise Moulonguet Bụ Onye Kacha Mee Agadi Ugbu a ná Ndị Frans Niile
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Armenian Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Finnish French Georgian German Greek Hungarian Igbo Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Korean Lithuanian Malagasy Norwegian Polish Portuguese Romanian Russian Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Slovak Slovenian Spanish Swedish Tagalog Turkish Ukrainian Xhosa Zulu
JENỤWARỊ 14, 2013
Irénise Moulonguet Bụ Onye Kacha Mee Agadi Ugbu a n’Ụmụ Amaala Frans Niile
N’ọnwa Nọvemba afọ 2012, otu nwaanyị aha ya bụ Irénise Moulonguet gbara otu narị afọ na iri na abụọ. A na-ekwu na ọ bụ ya tọchara ụmụ amaala Frans niile dị ndụ ugbu a. Onye ukwu na onye nta makwa na ọ bụ Onyeàmà Jehova.
E cheburu na ọ bụ otu nwaanyị a na-akpọ Maria Richard bụ onye kacha mee agadi na Frans. Ma, nke bụ́ eziokwu bụ na Irénise ji abalị iri abụọ na abụọ tọọ ya. Maria Richard nwụrụ n’ọnwa Ọktoba afọ agara aga, mgbe ọ fọrọ ntakịrị ka ọ gbaa otu narị afọ na iri na abụọ. Yanwa bụkwa Onyeàmà Jehova.
O nwekwara oge ụfọdụ ihe siiri Irénise ike ná ndụ ya. Mgbe ọ dị afọ abụọ, ugwu a na-akpọ Mount Pelée gbawara n’akụkụ ebe ha bi, ma o gbughị ya. Mgbe ọ dị afọ iri na ise, ọ kwagara ebe a na-akpọ French Gịyana, rụwa ọrụ ka o nwee ike ịna-enyere ezinụlọ ha nọ na Frans aka. Ka ọtụtụ afọ gachara, ọ laghachiri Matinik, lụọ di ebe ahụ ma mụọ ụmụ. Ma, di ya nwụrụ n’okorobịa, hapụrụ ya ụmụ atọ.
Irénise bidoro rụwa n’ọdọ unere ka o nwee ike ịkpa afọ ya na ụmụ ya. Otu nwoke ya na ya rụkọrọ ọrụ, onye dị afọ iri asatọ na ụma ugbu a ka na-echeta otú Irénise si dị ike ọrụ. Ọ sịrị: “Ọ na-eji naanị otu ụbọchị edozi isi unere karịrị otu narị na iri asaa na ise ka ụgbọala bịa buru ha.”
Ọ bụ eziokwu na ihe na-esiri ya ike mgbe ụfọdụ, mana mgbe ọ bụla ị hụrụ ya, obi na-adị ya ụtọ. O nwere ụmụ ụmụ iri asaa na ise. Otu n’ime ha sịrị na “ọ na-emekarị ihe ọchị, na ọ ma ihe, nakwa na ọ na-enwekarị mmasị ịkọ ihe ndị mere n’oge gboo na-eme ya obi ụtọ.” Otú a ọ na-eme ka ọtụtụ ndị agadi na-emekwa.
Ọ bụ eziokwu na ezinụlọ ma ọ bụ agbụrụ mmadụ si nwere ike ime ka mmadụ dịtee ndụ aka, ma onye ahụ ịna-enwe obi ụtọ, ịna-ebi ezigbo ndụ na inwe olileanya na ihe ga-aka mma na-enyekwa aka. Ọtụtụ ndị agadi a jụrụ ihe na-enyere ha aka kwuru na ha na-agbalị enwe oge ha wepụtara maka ihe ọ bụla ha na-eme, ha na-eri ezigbo nri, na-enwekwa obi ụtọ ná ndụ ha. Otu nchọpụta e mere gosiri na ndị agadi ndị a na-enwekarị ihe ha na-eji emegharị aka, ha na-adịkwa gara gara.
Ọtụtụ ndị chere na ihe na-eme ka mmadụ dịtee ndụ aka bụ ihe ịna-agara onye ahụ siriri werere, ma ọ bụchaghị ya. Otu nchọpụta e mere n’ọtụtụ ebe na Frans gosiri na ọtụtụ ndị a dị otu narị afọ ma ọ bụ karịa agabigala ọtụtụ nsogbu.
Otú ahụkwa ka ọ dị Irénise. Ọ gabigala ọtụtụ nsogbu. Otu n’ime ụmụ ụmụ ya ndị nwoke na-ekwukarị gbasara àgwà ọma ya. Ọ sịrị: “Ọ bụ eziokwu na ịga ije na-esiziri ya ike, ma o meghị ka ahụ́ na-agbakasị ya.”
A mụrụ Irénise na Chọọchị Katọlik. Ma, o nwere ọtụtụ ajụjụ gbasara Chineke ọ chọrọ ịmata azịza ha, ọ chọkwara ịma ihe mere mmadụ anaghị adịte ndụ aka. Ọ bụ mgbe ya na Ndịàmà Jehova na-amụ Baịbụl ka ọ matara azịza ajụjụ ndị ahụ. Mgbe m dị afọ iri asaa na anọ, ọ raara onwe ya nye Jehova Chineke. A jụọ ya ihe na-enyere ya aka n’agbanyeghị na ọ katala ahụ́, na-arịakwa ọrịa, ọ na-asịkarị: “Jehova bụ ike m. Ọ bụ ‘ogwe aka’ m dị ike. Ọ bụ ya mere m ji ‘adị ọhụrụ’ kwa ụbọchị.”—Diuterọnọmi 3:24; 2 Ndị Kọrịnt 4:16.
Irénise Moulonguet Tọchara Ndị Frans Niile Nọ Ndụ Ugbu A